Maxaa ku soo kordhay Sharciga Cusub ee Soo galootiga Sweden ee Barlamaanka la Horgeenayo Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaMaxaa ku soo kordhay Sharciga Cusub ee Soo galootiga Sweden ee Barlamaanka la Horgeenayo
Maxaa ku soo kordhay Sharciga Cusub ee Soo galootiga Sweden ee Barlamaanka la Horgeenayo
April 3, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Wakaaladda wararka ee Iswiidhan ayaa sheegtay , sida ay ku heshay macluumaad u gaar ah, in sharciga dowladda ee ku saabsan siyaasadda cusub ee soo galootiga uu dib u dhac ku imaanayo.
Sida laga soo xigtay wakaaladda, baarlamaanka Sweden waxaa lagu wargaliyay in soo jeedinta arintan ku saabsan ay ka soo daahidoonto waxa la qorsheeyay 8-da bishan Abriil.
Ilahaasi ma sheegin goorta ay taariikhda cusubi noqonayso.
soo jeedinta ee sharciga cusub inta badan waxaa ka mid ah siyaasadda soo galootiga oo laga adkeenayo intii hore .
Deganaanshaha ku meelgaarka ah waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay qaanuunka ugu weyn ee la tacaalida codsiyada magangalyada iyadoo la raacayo siyaasaddan la soo jeediyay.
Dowlada Iswiidhan waxaa laga filayey inay u soo dirto sharci dejinta cusub ee qorshaysan soogalootiga inta lagu gudajiray guga sanadka 2021, sharcigana waxaa markaa loo qorsheeyay in loo codeeyo baarlamaanka horraanta xagaaga ka hor inta uusan dhaqan galin July 2021.
hanaanka siyaasadeed ee ku xeeran arinkan ayaa adag Haddii aan la ansixin, sharciga socdaalka Iswiidhan wuxuu dib ugu laaban doonaa siduu ahaa ka hor intaan sharcigan kumeelgaarka ah ee hadda jira dhaqan gelin 2016